Home » မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကြံခိုင်ရေး » 2015 Horizon ကြံ့ခိုင်ရေးဝါရင့်ရဲ့နေ့ရောင်းရန် 11 / 11 / 15 သေးပါဘူးသက်တမ်းရှိ
ဒီ 400 Horizon ကြံ့ခိုင်ရေးဝါရင့်ရဲ့နေ့ရောင်းချခြင်းနှင့်အတူ Horizon / Vision ၏ကြံ့ခိုင်မှု elliptic နှင့် treadmill ဆိုင်နဲ့ off $ 600 မှစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီးကိုချွတ်တက်နဲ့ save $ 2015 အထိ! 11 /2/ 15 နှင့် 11 / 11 / 15 အကြားစျေးဝယ် and save:
အဆိုပါ T350 စက်ခါးပတ်ကိုချွတ် $ 101
အဆိုပါစွန့်စားမှု 400 စက်ခါးပတ်ကိုချွတ် $ 5
အဆိုပါ Elite T600 စက်ခါးပတ်ကိုချွတ် $ 9
EX-350 Elliptical ချွတ် $ 59
အဆိုပါအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာ 400 Elliptical ချွတ် $ 3
အဆိုပါအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာ 400 Elliptical ချွတ် $ 5
အဆိုပါ Elite E600 Elliptical ချွတ် $ 7
အဆိုပါ Elite E600 Elliptical ချွတ် $ 9
နှစ်သိမ့်ဦးကိုချွတ် $ 300
အဆိုပါနှစ်သိမ့် R ကိုချွတ် $ 200
အဆိုပါ Elite R300 ချွတ် $ 7
အဆိုပါ Elite U400 ချွတ် $ 7
အဆိုပါ Elite IC400 ချွတ် $ 7
ဒီ Horizon ကြံ့ခိုင်ရေးရောင်းရန်စျေးဝယ်ဖို့အောက်တွင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ကူပွန် Code ကိုသုံးပါရှိရမည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ဒီ 2015 Horizon ကြံ့ခိုင်ရေးဝါရင့်ရဲ့နေ့ရောင်းရန်နှင့်အတူ Save ဖို့
Horizon ကြံ့ခိုင်ရေးမှာဝါရင့်ရဲ့နေ့ရောင်းရန်စျေးဝယ်ဖို့ဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ! ဆိုင်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီးကိုချွတ် $ 400 မှတက်နဲ့ save $ 600 အထိချွတ် elliptic နှင့် treadmill! ကူပွန် Code ကို: နိုင်ငံကူးလက်မှတ်
ဒီရောင်းရန်၏အသားပေးစက်ခါးပတ်: အဆိုပါ Horizon T101 စက်ခါးပတ်
လက်လီစျေးပိတ်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $ 350! အခုတော့သာလျှင် $ 649.99! တစ်ဦးတစ်သက်တာ Frame ကများနှင့်မော်တော်အာမခံ Plus အားအခမဲ့သင်္ဘောပါဝင်သည်!
Horizon ကြံ့ခိုင်ရေးမှာဝါရင့်ရဲ့နေ့ရောင်းချခြင်း! T350 စက်ခါးပတ်ကိုချွတ်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် $ 101 - အခုတော့သာလျှင် $ 649.99! တစ်သက်တာ Frame ကများနှင့်မော်တော်အာမခံနှင့်အခမဲ့သင်္ဘော!
နိုဝင်ဘာလ 3, 2015 admin မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကြံခိုင်ရေး မှတ်ချက်မရှိ